Tilix 1.8.7, oo ah nooc cusub oo kambiyuutarka emulator-ka ah ee 'Linux emulator terminal' | Laga soo bilaabo Linux
Haddii aad jeceshahay inaad qaabeysid noocyada kala duwan ee Linux, waxaad u badan tahay inaad taqaanid Tilix, oo ka mid ah kuwa ugu caansan emulators ee loo heli karo Linux. Waa codsi aad u wanaagsan oo dad badani u maleynayaan in lagu daro barnaamijyada asaasiga ah ee GNOME. Maanta waxaan haynaa cusbooneysiin la heli karo waana kuu sheegi doonaa taas.
Tilix waa emulator sal adag oo la adeegsado maktabada VTE GTK + 3, marka waxay soo bandhigi kartaa in kabadan hal daaqad markiiba. Waxa kale oo ay leedahay astaamo kale oo badan oo aan laga heli karin wax kale oo kale, xitaa kuma jirin terminaalka GNOME.
Astaamahaas waxaa ka mid ah awood u leh inuu jiido darbiyada si dib loogu habeeyo, isku xirnaanta koodhka inta udhaxeysa boosteejooyinka furan, magaca gawaarida caadiga ah iyo qaabka caanka ah ee "Quake".
Maxaa ku cusub Tilix 1.8.7
Inaad noqoto cusbooneysiintaada cusub lix bilood kadib, Tilix 1.8.7 waxay keeneysaa tiro badan oo astaamo cusub astaamo ay ka mid yihiin cusbooneysiinta astaanta dalabka, awoodda aad ugu meeleyneyso tuuryo qaab-dhismeedka, miis cusub oo isafgarad ah, awood u lahaanshaha inaad ku eegto heerka cinwaanka, iyo inbadan.
Dhinaca kale waxaan haynaa wax badan oo hagaajin ah sida dhibaatada ka timaadda xusuusta oo buux dhaafisay dhinaca dhinac, dhibaatooyinka midabka ee mawduuca Solarized, dhibaatooyinka ku saabsan wada hadalka dhejiska markii amarku uu lahaa xarfo badan, iyo kuwo kale.
Si aad ugu rakibto cusbooneysiintan xoqitaanka waxaad u baahan tahay oo keliya inaad soo dejiso feylka ka soo deg linkigan GitHub oo socodsiiya xeerarka soo socda:
Amaradaani waxay kuu qaban doonaan shaqada oo dhan waxaadna u bilaabi kartaa arjiga sidii caadiga ahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Tilix 1.8.7, oo ah nooc cusub oo ka mid ah emulator-ka terminal-ka ah Linux caan ah